Inona ny Quality Management Project?
Quality Management Project:Ny fitantanana ny kalitaon'ny andro sy ny fitantanana raharaham-barotra dia tsy mivadika. Manamarika izy roa ireo fa ny tsy fitokisana ny mpanjifa sy ny faharesen-dahatra fototra dia manosika ny mpanjifa ny hatsaram-panahy. Ny tanjon'ny lehibe amin'ny fitantanana kalitao dia ny fiantohana fa ny orinasa dia miresaka ny olana atrehina voalohany-tsy misy zavatra hafa, na inona na inona. Amin'ny fiafaran'ny andro, mba hiantohana ny kalitao, tokony hifanaraka amin'ny olan'ny namana ianao.
Ny fihaonana na ny fepetra ambonimbony kokoa, na amin'ny lafiny inona na amin'ny inona, dia tsy ampahany amin'ny fitantanana ny kalitaon'ny fahombiazana. Araka izay asehon'ny Torolàlana ho an'ny Ny fitantanana ny tetik'asa momba ny fahalalana (PMBOK® Guide), Ny kalitao dia "ny anton-javatra ahafahana mampifanaraka ny zavatra ilaina."
Ny vondrona administrateur sy ny vondrona fitantanana raharaham-barotra dia manana adidy miavaka amin'ny fanitsiana ny kalitao sy ny kilasy (kilasy na laharana voatendry amin'ny zavatra na ny fitantanana izay manana fampiasana azo ampiasaina ihany, nefa mbola manana toetra miavaka manokana). Io andraikitra io dia miantoka ny faniriana tsara.
Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Jereo fepetram-pampiasana ho an'ny antsipirihany. Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka
Eo am-piandohan'ny fisamboarana, mila mifanaraka amin'ny mpiara-miasa ny zavatra ilaina. Ireo fepetra ireo dia mitodika amin'ny fametrahana ny asan'ny orinasa. Hatramin'io fotoana io, ny asan'ny mpikarakara ny fiantohana dia ny fiantohana fa vita ny asa tsy misy zavatra fanampiny tafiditra. Ny kalitao dia tsy manome ny zavatra fanampiny amin'ny mpividy na ny fanaovana asa fanampiny. Ny fiheverana ireo zavatra fanampiny dia matetika arakaraky ny mety tsy mety ny fahatsapany ny zavatra atokisanao ny mpanjifa. Ireo zavatra fanampiny ireo dia ahitana ny fotoana, ny fandaniana mety sy ny vokany samihafa amin'ny orinasa nefa tsy mitondra ny fampivoarana ny mpanjifa.
Ny fanitarana ny fitantanana kalitao dia ahitana fomba telo miavaka:
Manamboara ny fitantanana kalitao: ny fanekena ny kalitao sy ny fepetra ilaina amin'ny fisamborana sy ny singa.
Manaova fanamarinana kalitao: Manombana ny fepetra avoakan'ny kalitao sy ny vokatra fanaraha-maso tsara mba ahazoana antoka fa ilaina ny modely fanamoriana.
Ny kalitaon'ny fitantanana: fanaraha-maso sy famoahana ny vokatra avy amin'ny kalitao mba hanombanana ny famonoana ary hanolorana fiovana fototra.
Ny lanjan'ny kalitao dia fototry ny fahatakarana ireo fomba telo ireo. Mba hahalalana ny kalitaon'ny kalitao, tokony ho fantatrao ny dikan'ny teny manaraka:
fankatoavana: fanamafisana fa ny singa dia mifanaraka amin'ny zavatra ilaina
ny fandraisana ho mpikambana: mifanaraka amin'ny fitsipika
fametrahana mazava tsara: fepetra haverina amin'ny famoriana henjana
fametrahana mazava tsara: Manakaiky ny fepetra momba ny tena fiheverana
ny niatrika an'izany: ny vokatra mahafa-po
Ny fanapahan-kevitry ny fitantanana ny fitantanana ny tetikasa dia mamaritra ireo fepetra marim-pototra izay fitaovana ho an'ny orinasa ary mamorona fomba iray hanatanterahana azy ireo. Ny tanjon'izy ireo dia ny mametraka rafi-pitantanana kalitao ahafahana mitatitra amin'ireto manaraka ireto:
Ny fomba hanatanterahan'ny tarika ny tetikady tsara
Ny fomba hahaizana ny kalitao avy amin'ny orinasa sy ny entana dia ho azo antoka ao anatin'ilay orinasa
Ny fananana ilaina mba hiantohana ny kalitao
Ny fampiharana fanampiny dia manan-danja hanaovana ny fandaminana kalitao
Ny fanavahana ireo zavatra ireo dia mety hamela fanavaozana ny drafitry ny fitantanan-draharaha na ny kalandrie, izay manantitrantitra ny fomba fandrosoana ny fandaharana sy ny fisoratana.
Ny fandaharana, toy ny ampahany samihafa natao teo am-pandehanana sehatra, dia ny mpitantana ny firoborobo miaraka amin'ny fandraisana anjara avy amin'ny mpiara-miasa. Rehefa miomana ho amin'ny kalitao amin'ny fisainana dia maka aorian'ny fikarakarana kalitao momba ny kalitao izay napetraka. Raha tsy misy ny fananganana kalitao momba ny kalitaon'ny orinasa iray, dia tokony hanao ny iray ho an'ny firoboroboana ny vondrona. Ny vondrona mpandraharaha dia mety mila manitsy ny fomba fiasa amin'izao fotoana izao mba hifanaraka kokoa amin'ny lalan'ny firoboroboana.
Mpitantana ny tetikasa fanadihadiana fanontaniana valiana
Sora-pampianarana momba ny Business Analysts ho an'ny mpandresy & Professional